Iindlela zokuhlalutya iNtsebenzo yakho ye-SEO NgoSemalt
YINTONI I-SEO UKWENZIWA KOMSEBENZI?
IZIBHENGEZO ZOKWENZIWA KOMSEBENZI WOKUZALWA KWE-SEO
UKWENZA INDAWO YOKUTHENGA I-SEO NGOKUGQIBELA
Yonke imihla abanini bewebhusayithi abaninzi, ii-webmasters, abahlalutyi, kunye neearhente zentengiso yedijithali banika amandla okwenza uluhlu lweewebhusayithi okanye zabathengi kwiziphumo zokukhangela zikaGoogle.
Yonke imizamo yabo ijikeleze kwikota enye, i- SEO . Ukuchonga kunye nokusebenzisa iimfuno ze-SEO zibanceda baphucule indawo yewebhusayithi kwiiSERPs (Amaphepha eSiphumo seNjini yokuKhangela).
Kukho izixhobo ezikhoyo zokuhlalutya intsebenzo ye-SEO yewebhusayithi, kodwa ukufumana eyona ilungileyo akukho nto ingaphantsi kokuwina ihafu yokulwa.
Eli nqaku likunika ukuqonda malunga nokuhlaziywa kokusebenza kwe-SEO kunye nokuba ngumthombo othembekileyo, uSemalt, onokukunceda njani ukufezekisa iinjongo zakho ze-SEO.
Ukuba awukwazi kulinda ukulinda isixhobo sokuhlalutya iwebhusayithi seSemalt, cofa apha kwaye wonwabe. Unokuqhubeka nokufunda inqaku kwaye ufunde ngeendlela zokuhlalutya intsebenzo ye-SEO kunye neSemalt.
Luyintoni uhlalutyo lokusebenza kwe-SEO?
Uhlalutyo lwentsebenzo ye-SEO luvavanyo ngononophelo lwendawo kwiiparameter ezahlukeneyo ezinxulumene ne-SEO. Kubandakanya ukuphicothwa kwewebhusayithi kunye nokuchonga iimfuno zokwenziwa kwenqanaba eliphezulu kwiiSERPs.
Uhlalutyo lwentsebenzo ye-SEO lukunceda ukuba ufumane ukuba ngaba isicwangciso sakho se-SEO sikulayini kwaye yeyiphi na imiba, echaphazela ubume bendawo yakho, kufuneka uyijongile.
Ukubaluleka kohlalutyo lwentsebenzo ye-SEO
Ulwazi olunikezwe luhlalutyo lwentsebenzo ye-SEO ekugqibeleni lunokukunceda ngoku kulandelayo:
Uncedo ekwandiseni ukufikelela kwakho.
Kuqhutywa ngakumbi ukugcwala kwiwebhusayithi yakho.
Inceda indawo yakho yewebhusayithi ephezulu kwiziphumo zokukhangela.
Kukuvumela ukuba ufezekise iinjongo zakho zobungcali ngokukhawuleza.
Ngolu hlalutyo, wenza izigqibo ezifanelekileyo kunye nezicwangciso zobuchule. Ixesha kunye nemali efunekayo ekuphuculeni umgangatho we sayithi yakho nayo incipha kakhulu.
Ukungabikho kovavanyo lwentsebenzo ye-SEO egqibeleleyo, ukwenza izigqibo ezinolwazi zokuphucula umgangatho wendawo kwiziphumo zokukhangela zikaGoogle phantse akunakwenzeka.
Izinto ezifanelekileyo kwi-SEO Performance
Uphuhliso lwamva nje lwe-algorithms zikaGoogle kugxila kwiziza ezinomvuzo ezibonisa ukubaluleka komxholo, kwaye ungasebenzisi nje amaqhinga obuchwephesha ukuya kwinqanaba eliphezulu.
Zininzi izinto ezisisiseko ze-SEO eziluncedo ekuhlalutyeni kunye nasekusebenziseni iwebhusayithi. Ezinye ezibalulekileyo zezi:
Ukukhutshwa kwegama eliphambili
Ukuzibandakanya kweendaba zeNtlalo
Ukupapashwa kwesiqhelo komxholo
Masiqonde nganye nganye:
Yonke iwebhusayithi kufuneka ibonelele ngolwazi lobuchwephesha kubaqambi bewebhu ukuze bayiqonde, bafumane, kwaye bayidwelise kwiziphumo zophando. Obu buchule busebenza okanye buvele, kuxhomekeke kwizenzo zomnini webhusayithi.
Izinto zobugcisa ezisebenzayo ziquka amanyathelo athatyathiweyo ukwazisa ienjini yokukhangela ngotshintsho kwindawo. Umzekelo wale ndlela kukudibanisa iwebhusayithi yakho kwi-webmaster izixhobo zeenjini zokukhangela ukusebenza kwayo kwe-SEO.
Ubuchule bokuziphatha buquka amanyathelo athatyathiweyo ukubonelela ngeenjini zokukhangela ulwazi olufunekayo kumaphepha esalathiso sendawo. Umzekelo wokungena nje kukubonelela ngefayile ye-XML kwiinjini yokukhangela ukuze baqonde ngcono ukuba yeyiphi imixholo efuna indexing.
Ukuba iwebhusayithi yakho ayinayo i-SEO, yonke imizamo oyenzayo ukuyila nokuvelisa umxholo onomdla yinkunkuma njengoko ii-injini zokukhangela zingaphumeleli kwisalathiso sendawo yakho.
Amagama aphambili ngamagama okanye amabinzana abantu abawasebenzisayo ukukhangela iimveliso, iinkonzo, okanye ulwazi ngokusebenzisa iinjini zokukhangela. Abapapashi bomxholo kunye nabanini bewebhusayithi bachonga amagama aphambili asetyenziswa ukukhangela iimveliso zabo okanye iinkonzo, kwaye ke, yenza umxholo ofanelekileyo.
Xa ufumana amagama aphambili afanelekileyo kwiminikelo yakho, kuya kuba lula ukwenza umxholo uwusebenzise. Ngenxa yoko, iwebhusayithi yakho iya kutsala ngakumbi nangakumbi ukugcwala kwabantu.
Qaphela ukuba akufanele usebenzise ngaphezulu, ukusetyenziswa gwenxa, okanye ukusebenzisa amagama aphambili kuba xa oku kusenzeka, iinjini zokukhangela azichithi xesha lininzi ukohlwayeni iwebhusayithi.
Iiwebhusayithi zinxibelelana ngewebhu, kwaye ezi webpage kufuneka zijolise kumxholo wokubhalwa kwemikhwa (landela isikhokelo esithile kunye nemithetho emalunga nomxholo) ukukhulisa ukufikelela kunye nokukhangela kwiinjini zewebhusayithi.
Ukwenza iikhowudi ngaphakathi kubandakanya indlela efanelekileyo yokwenza iphepha. Kuya kufuneka ichaze ukulandelelana komxholo kwiphepha lewebhu ukukhangela kwiinjini. Qiniseka ukuba isihloko sephepha, izihloko kunye nezihlokwana (H1, H2, H3, H4), amanqaku alo ongezantsi, kunye nezinye izinto zenziwe ngekhowudi ukuze zibonwe lula ziinjini zokukhangela.
Kuya kufuneka usebenzise amagama aphambili kwaye ugcine ubungakanani bawo kwiphepha lakho lewebhu. Thatha ukhathalelo lwezikhokelo ezixineneyo zamagama kunye nemifanekiso ngokunjalo.
Namhlanje, i-backlinks ibalulekile kuba ifuthe kwinqanaba lephepha lewebhu kwiinjini zokukhangela. I-backlinks ziiwebhusayithi ezinxibelelanisa umva kwiphepha lewebhu.
Ukuqonda umdlalo we-backlinks kunamaqhinga. Zimbini izinto ekufuneka umntu aziqonde:
Zonke iisayithi ezalathiswe kuGoogle zinikwa i-PageRank esekwe kwinani leesayithi ezinxibelelanisa umva kuzo.
I-backlinks evela kwiwebhusayithi enye enePageRank ephezulu inesisindo esingakumbi ngokuthelekisa ii-backlinks ezivela kumakhulu eziza ezinePageRank ephantsi.
Ukuba iphepha lakho lewebhu lifumana i-backlinks kwiwebhusayithi ene-PageRank ephezulu, iiinjini zokukhangela ziqala ukuqwalasela iphepha lakho lewebhu njengesixhobo esibalulekileyo, kwaye ke, sikwenzele phezulu.
Amaqonga eendaba ezentlalo asebenza kakuhle xa kuziwa ekwabelaneni ngomxholo. Ukwabela inqaku okanye ifayile yemidiya kumaqonga eendaba ezentlalo anjenge-Facebook, i-Twitter, iLinkedIn, kunye nezinye zithetha ukudala i-backRink ephezulu ye-PageRank kwiwebhusayithi.
Phantse yonke into ekwabelwana ngayo kwimidiya yoluntu ngumntu wonke, abanye abantu bacinga ukuba nokwabelana ngakumbi kuphucula umgangatho wewebhusayithi. Ewe, ayisiyiipesenti eziyi-100 eziyinyani.
Kwiinjini zokukhangela, isiqwenga somxholo sibalulekile ukuba nesabelo esithe kratya kunye nokuzibandakanya okukhulu. Kubandakanya inani lokuthandwa, iikhomenti, kunye ne-tweets kwakhona okanye ukwabelana kwakhona.
Ukuba oku kuyenzeka kwiwebhusayithi yakho, iijini yokukhangela ziya kuqaphela ukuba umxholo okuyo uluncedo kwaye uqokelele umbulelo ngezenzo. Ke, baya kuyibeka phezulu ngokwemvelo.
Iinjini zokukhangela, ezinjengeGoogle, iiwebhusayithi ezikwinqanaba hhayi kuphela ngenxa yokuhambelana kobugcisa, amagama aphambili, umxholo, kunye nokwabelana ngeendaba zosasazo kodwa nangenxa yamava okwenyani abasebenzisi ngomxholo wewebhu.
Amava omsebenzisi abandakanya uyilo lwewebhusayithi kunye nokubekwa komxholo kuyo. Ukongeza kwezinye izinto ezisisiseko, uGoogle ukwathathelwa ingqalelo ukubekwa komnxeba kwizinto zentshukumo kwiphepha lewebhu.
UGoogle uyabulela ukuba izinto ezinjengeentengiso okanye iqhosha lokubhalisela okanye iqhosha lokuthenga ziyafikeleleka ngaphandle kokukrola iphepha ezantsi. Ewe, iyanceda kwinqanaba lewebhusayithi.
Oko akuthethi ukulisebenzisa gwenxa eli candelo (ngaphezulu kwesibaya). Umzekelo, u-Google wohlwaya xa efumanisa ukuba iwebhusayithi yakho ineentengiso ezininzi ngaphezulu kwesibaya.
Iwebhusayithi kufuneka ibe nomxholo wokudweliswa kwaye ubekwe kwiinjini zokukhangela. Ukuba kukho iphepha elingaphezulu komxholo kwiiwebhusayithi, ii-injini zokukhangela zineekhonkco ezininzi zokujonga.
Sisizathu sokuthandwa nokuphumelela kweendawo zeendaba. Bapapasha rhoqo umxholo omninzi othi, wona, unyuse kungekuphela nje inani lamaphepha enkomba, kodwa kunye nokugcwala.
Kukho iibhlog ezikhethekileyo ezihambisa rhoqo amanqaku anamagama aphambili kunye nemixholo. Eli lungiselelo lixelela uGoogle ukuba iibhlog ezikhethekileyo ziluncedo. Ke, zibabeka phezulu.
Konke oku kuthetha ukuba umxholo opapashwa rhoqo ngumxholo obalulekileyo. Ukuba uthumela rhoqo izinto ezintsha, ezenziwe ngomgangatho ofanelekileyo, kunye nomxholo ofanelekileyo kwiwebhusayithi yakho, iinjini yokukhangela ziya kuyigcina kwaye iphucule umgangatho wayo.
Ukuhlalutya iNtsebenzo ye-SEO kunye neSemalt
Ukuthatha zonke izinto ezibalulekileyo ze-SEO akukho lula kumntu ngamnye. Kungenxa yoko kukho iinkampani zokuthengisa zedijithali, ezinjengeSemalt, ezineengcali zokuphatha izinto ezahlukeneyo ze-SEO.
Kwiinkampani ezinjengeSemalt, ezinye iingcali ziphatha umxholo we-curation, ezinye ziphatha ubuchwephesha, ezinye zijolise kwi-backlinks, kwaye iyaqhubeka ngolu hlobo. Imizamo edibeneyo yezi ngcali ikhokelela ekuphuculeni ukusebenza kwe-SEO yewebhusayithi.
I-Semalt ibonelela ngenkonzo ye- analytics yewebhu elandelayo.
Ukubeka iliso kwimarike yakho
Landa umkhondo wakho ngokunjalo nezikhundla zokhuphiswano lwakho
Ifumana ulwazi olupheleleyo malunga neshishini lakho
I-Semalt inceda kuzo zonke ii-KPI (iziKhombisi eziBalulekileyo zokuSebenza) kwimpumelelo ye-SEO. Ezinye zazo zezi:
Uhlalutyo olupheleleyo lwewebhusayithi
Ukubandakanyeka kwimidiya yoluntu
Isebenza njani iwebhusayithi yohlalutyo?
Okokuqala, kufuneka ubhalise kunye neSemalt kwaye uqalise inkqubo yokufumana idatha yohlalutyo. Xa inkqubo igqibile, uya kufumana ingxelo eneenkcukacha:
Uluhlu lwabakhuphisana bakho
Uvavanyo lwewebhusayithi yakho ngokubhekisele kwimigangatho yecandelo loyilo lwewebhusayithi kunye ne-SEO
Ungayiguqula le ngxelo ineenkcukacha kwi-CSV kunye nefomathi yePD kwaye uzikhuphele kwikhompyuter yakho. I-Semalt ikwavumela ukuthumela i-imeyile le ngxelo yohlalutyo.
Ukuqala ngokuhlaziywa kwewebhusayithi kulula kwaye kusimahla. Udinga nje ukungena kwisizinda sendawo, kwaye ngaphakathi umzuzu okanye emibini, uya kufunda ngezinto ezithintela iwebhusayithi yakho kwisikhundla esiphezulu kwiziphumo zokukhangela.
Ukongeza isiza sakho 'Ukuhlaziywa kwe-PRO' simahla, ungacofa apha kwaye uskrole ezantsi. Xa uyifumana, faka nje igama lewebhusayithi yakho kwaye ucofe iqhosha 'lokuqala ngoku'.
Ukuhlalutya ukusebenza kwe-SEO kubalulekile ekuphuculeni umgangatho wewebhusayithi kwiinjini zokukhangela. Kuyanceda ukubona izinto ezinoxanduva lokuyibhala phantsi iwebhusayithi yakho.
Uhlalutyo linyathelo lokuqala lokuphucula ukusebenza kwe-SEO yendawo. Ukwazisa ngezinto ezifuna ukuphuculwa, ke sebenzela kuzo.
Nangona kunjalo, eyona ndlela kukuqesha iinkonzo zearhente yentengiso yedijithali, njengeSemalt. NgoSemalt, unokuphumla embhedeni wakho kwaye ubukele iwebhusayithi yakho ithandwa kakhulu.